४० करोडमा यस्ताे बन्दैछ प्रधानमन्त्रीको नयाँ निवास, के-के हुन्छन् भित्र ? « Kakharaa
४० करोडमा यस्ताे बन्दैछ प्रधानमन्त्रीको नयाँ निवास, के-के हुन्छन् भित्र ?
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वर्षभित्र नयाँ निवास बन्ने भएको छ । बालुवाटारको अहिलेको संरचना भत्काएर दुई भवन बनाउने सरकारी तयारी छ । एउटा भवनमा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हुनेछ भने अर्को भवनमा भेटघाट र बैठक कक्ष हुनेछन् । नयाँ संरचना बनाउन ४० करोड लगानी हुनेछ ।